လမ်းညွှန်များကို GNU / Linux တွင်မည်သို့ဖွဲ့စည်းထားသနည်း။ | Linux မှ
လမ်းညွှန်များကို GNU / Linux တွင်မည်သို့ဖွဲ့စည်းထားသနည်း။
Perseus | | အကြံပြုပါသည်, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
ကျွန်တော်တို့အများစုသည် Windows ၏အချို့ဗားရှင်းများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုရန်သင်ယူခဲ့ကြသည်။ သူတို့သင်ပေးတဲ့ပထမ ဦး ဆုံးကျွမ်းကျင်မှုတွေထဲကတစ်ခု ((အနည်းဆုံးတော့ဒါမျိုးဖြစ်ခဲ့တာပါ) hard drive ဒါမှမဟုတ်ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့မီဒီယာတွေပေါ်မှာငါတို့ရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေထဲမှာပါတဲ့ငါတို့ရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း (ကျွန်ုပ်ဆရာများကဘယ်လိုရွှေ့ပြောင်းရမယ်ဆိုတာကိုစာမေးပွဲအောင်နေတုန်းပဲမှတ်မိသေးတယ်) စနစ်အတွင်းရှိဖိုင်များနှင့်ဖိုင်တွဲများကိုကူးယူခြင်း၊ စုစည်းခြင်း၊ စုစည်းခြင်းနှင့်နေရာချထားခြင်းတို့ပြုလုပ်ပါ။ ထိုသူများသည် Win 3.1 XD ၏ဖိုင်မန်နေဂျာနှင့်အလွန်လေးလံသည်။
ဒီတစ်ခါတော့ငါတို့ဘယ်လိုမြင်ကြမှာလဲ GNU / Linux ရှိလမ်းညွှန်အဆင့်ဆင့်။ ၎င်းသည် ၁၀၀% ကိုသိရန်အလွန်မလိုအပ်သည်မှာမှန်ပါသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သင်၏ဘဝကို၎င်းကိုစိတ်ကူးထားရှိရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေမည်ဟုကျွန်ုပ်ကိုယုံကြည်ပါ။ )
ကျွန်ုပ်သည်ဤဆောင်းပါးအားအမြန်လက်လှမ်းလမ်းညွှန်ဖြစ်ရန်နှင့်အနာဂတ်ရည်ညွှန်းမှုအတွက်ရည်ညွှန်းလမ်းညွှန်ဖြစ်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုလုံးအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဒီအဘို့, ငါယုံကြည်သောသတင်းအချက်အလက်ပိုမိုဖြစ်ပါတယ် "အထူးပြု" လျင်မြန်စွာဖတ်ရန်နှင့်လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်၎င်းသည် ပို၍ နိမ့်ကျသောအရောင်ဖြစ်သည်။
UNIX ဖိုင်စနစ်တွင် (နှင့် GNU / Linux ကဲ့သို့) နှင့်တူသည်မှာစနစ်တစ်လျှောက်တွင်သိုလှောင်မှုနှင့်ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးမျိုးနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောသိုလှောင်မှုနှင့်အဖွဲ့အစည်းလုပ်ဆောင်မှုများစွာရှိသောလမ်းညွှန်ခွဲများများစွာရှိသည်။ ဤလမ်းညွှန်များကိုခွဲခြားနိုင်သည်။
<°တည်ငြိမ်သော: ၎င်းတွင်ကြီးကြပ်သူ (root) ၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမပါဘဲမပြောင်းနိုင်သောဖိုင်များပါ ၀ င်သော်လည်းအခြားမည်သည့်အသုံးပြုသူမဆိုသူတို့ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ (/ bin, / sbin, / ရွေးချယ်ပါ, / boot တက်, / usr / bin... )
<° Dynamic: ၎င်းတွင်ပြောင်းလဲနိုင်သောဖိုင်များပါ ၀ င်ပြီးဖတ်နိုင်၊ ဖတ်နိုင်သည် (အချို့သည်သက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုသူနှင့် root မှသာ) ။ ၎င်းတို့တွင်ချိန်ညှိချက်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများစသည်တို့ပါဝင်သည်။ (/ var / mail, / var / spool, / var / run, / var / lock, / နေအိမ်... )
<°မျှဝေသည် - ၎င်းတွင်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးတွင်တွေ့နိုင်ပြီးအခြားတစ်ခုတွင်သုံးနိုင်သည်သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူများအကြားမျှဝေနိုင်သည်။
<°ကန့်သတ်ချက် - ၎င်းတွင်မျှဝေ။ မရနိုင်သောဖိုင်များပါ ၀ င်ပြီး၎င်းတို့သည်စီမံခန့်ခွဲသူမှသာပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်သည်။ (/ etc, / boot တက်, / var / run, / var / lock... )
အမြစ်: အကောင့်အားလုံးတွင်အခွင့်အရေးအားလုံးရှိသည့်အသုံးပြုသူအကောင့်၏သမားရိုးကျအမည်ဖြစ်သည် (အသုံးပြုသူတစ် ဦး တည်း (သို့) multi) ။ Root ကိုလည်း superuser လို့ခေါ်တယ်။ များသောအားဖြင့်၎င်းသည်စီမံခန့်ခွဲသူအကောင့်ဖြစ်သည်။ root အသုံးပြုသူသည်ပိုင်ရှင်သို့မဟုတ်ဖိုင်များ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်သေးငယ်သော ports များနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းကဲ့သို့သောသာမန်အသုံးပြုသူမလုပ်နိုင်သောအရာများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ရိုးရှင်းသောအသုံးပြုသူကိုရိုးရှင်းသောပုံမှန်အသုံးပြုရန်အတွက်အသုံးပြုရန်အကြံမပြုပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၄ င်းသည်ပြေးနေသောပရိုဂရမ်တစ်ခုစီကိုအခွင့်ထူးခံခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်စနစ်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။ သာမာန်အသုံးပြုသူအကောင့်ကိုသုံးပြီးလိုအပ်လျှင် root privilege ကိုရယူရန် su command ကိုအသုံးပြုသည်။
ဘယ်မှာသစ်ပင်၏အမြစ်/) လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အကိုင်းတစ်ခုလုံး၏အခြေခံဖြစ်သည်။directory များနှင့်ဖိုင်များ) ထသို့မဟုတ်ကပြောသည်အခြေစိုက်စခန်းကနေဆွဲထား။
1 GNU / Linux ရှိ Directory tree တည်ဆောက်ပုံ
GNU / Linux ရှိ Directory tree တည်ဆောက်ပုံ
အချို့သော Linux ဖြန့်ချိမှုများသည်၎င်းတို့လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန် directory tree ၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲကြသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စံကိုအောက်ပါဖြစ်ပါသည်:
ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကြည့်ရှုသည့်ပုံစံဖြစ်သည် (desktop ဖန်သားပြင်၌ပင်ကျွန်ုပ်၏ XD metal spirit ကိုထင်ဟပ်သည်):
<° / (အမြစ်) root directory နှင့်ဆင်တူသည် "ဂ:DOS နှင့် Windows လည်ပတ်မှုစနစ်များ၏။ ၎င်းသည်လမ်းညွှန်အဆင့်ဆင့်အတွင်းရှိအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်စနစ်တစ်ခုလုံးအတွက်ကွန်တိန်နာဖြစ်သည် (ဖယ်ရှားနိုင်သော disk များ [ဖိုင်များ၊ ဒီဒီ၊ ဒီ၊ pen drives များစသဖြင့်ဖိုင်စနစ်သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်း]) ။
<° / bin (binary) Binaries များသည် Linux executable များ (ဖိုင်များနှင့်ဆင်တူသည်) ။exe Windows ကို) ။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် operating system ၏ကိုယ်ပိုင်ပရိုဂရမ်များ၏ executable များကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
<° / boot (boot) ဤနေရာတွင် Linux ကိုစတင်ရန်လိုအပ်သောဖိုင်များကို bootloader configuration files များမှတွေ့ရှိရသည်။ဖလောင်းကောင် - Lilo) ပင်သူ့ကိုယ်ပိုင် kernel ကို စနစ်၏။
Boot loader: ၎င်းသည် operating system တစ်ခု၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအားလုံးမရှိသောရိုးရှင်းသော program တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၄ င်းသည် operating system လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကိုပြင်ဆင်ရန်သီးသန့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
Core သို့မဟုတ် kernel: ၎င်းသည် operating system ၏အရေးကြီးဆုံးသော software ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မတူညီသောပရိုဂရမ်များကိုကွန်ပျူတာစက်ပစ္စည်းများနှင့်အခြေခံအားဖြင့်လုံခြုံသော ၀ င်ရောက်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်အဓိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စနစ်ခေါ်ဆိုမှုဝန်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့်အရင်းအမြစ်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ဖြစ်သည်။
<° / dev (စက်ပစ္စည်းများ) ဒီ folder ထဲမှာ system devices တွေပါ ၀ င်ပါတယ်။ ဥပမာ directory တွေမတပ်ဆင်ထားသေးသူများ (ဥပမာ - မိုက်ခရိုဖုန်းများ၊ ပရင်တာများ၊ ဘောပင် drives များ (USB sticks) နှင့်အထူးကိရိယာများ (ဥပမာ - / dev / တရားမဝင်သော) ။ Linux သည်သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက်ဖိုင်များကိုအခြားဖိုင်တစ်ခုကဲ့သို့ဆက်ဆံသည်။
/ dev / null သို့မဟုတ် null device (null peripheral): ၎င်းသည်ရေးသားထားသောသို့မဟုတ်ပြန်ညွှန်းသောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်သည့်အထူးဖိုင်ဖြစ်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၎င်းသည်ဖတ်ရှုရန်ကြိုးစားသည့်မည်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမဆို EOF (သို့) ဖိုင်၏အဆုံးကိုသာပြန်ပို့ပေးသည်။ / dev / null သည်အထူးဖိုင်ဖြစ်ပြီးလမ်းညွှန်မဟုတ်သောကြောင့်၊ အများဆုံးအသုံးပြုသောနည်းလမ်းမှာ redirection ဖြင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ (mv) သို့မဟုတ်အတွင်း၌ (cp) ဖိုင်များကိုကူးယူ။ မရပါ။
<° / etc (စသည်တို့) ထည့်သွင်းထားသောပရိုဂရမ်များ၏ configuration ဖိုင်များနှင့် system startup တွင်လုပ်ဆောင်သော script အချို့ကိုဤနေရာတွင်သိမ်းထားသည်။ ဤအဖွဲ့စည်းဖိုင်များ၏တန်ဖိုးများကိုသက်ဆိုင်ရာ "အိမ်" (ကိုယ်ပိုင်ဖိုလ်ဒါ) တွင်ရှိသည့်အသုံးပြုသူပြင်ဆင်ရေးဖိုင်များဖြင့်အစားထိုးနိုင်သည်။
/ etc / opt / လမ်းညွှန်အတွင်း၌တည်ခင်းprogramsည်ပရိုဂရမ်များအတွက်စီစဉ်ဖိုင်များ / ရွေးချယ်ပါ.
/ etc / X11 / X Window စနစ်အတွက်ပြင်ဆင်မှုဖိုင်များ၊ ဗားရှင်း ၁၁ ။
X: ၎င်းသည် operating system နှင့်လုံးဝအမှီအခိုကင်းသောဂရပ်ဖစ်အချက်အလက်များကိုပြသရန်တာဝန်ရှိသည်။
/ etc / sgml / SGML အတွက်စီစဉ်ဖိုင်များ။
SGML ဘာသာစကား: ၎င်းတွင်စာရွက်စာတမ်းများကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းအတွက်စနစ်တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်စာရွက်စာတမ်းများတံဆိပ်ကပ်ခြင်းအတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုသတ်မှတ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်အထူးတံဆိပ်တပ်ရမည်ကိုဖော်ပြသည်။
/ etc / xml / XML အတွက် configuration ဖိုင်များ။
XML- ၎င်းသည် World Wide Web Consortium (W3C) မှတီထွင်ထားသော extensible tag metalanguage တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် SGML ကိုရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။ အဆင့်မြင့် SGML အင်္ဂါရပ်အချို့ကိုရှောင်ရှားသောကြောင့်၎င်းသည်အကောင်အထည်ဖော်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
<° / အိမ် (အိမ်): သီးခြားလမ်းညွှန်ရှိသော superuser (administrator, root) မှလွဲ၍ အသုံးပြုသူ၏ဖွဲ့စည်းပုံဖိုင်များနှင့်အသုံးပြုသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖိုင်များ (မှတ်တမ်းများ၊ တေးဂီတ၊ ဗီဒီယိုများစသဖြင့်) ဤတွင်ဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။ Windows တွင်ရှိသော "My Documents" နှင့်ဆင်တူသည်။
<° / lib (စာကြည့်တိုက်များ): ၎င်းတွင်ထည့်သွင်းထားသောပရိုဂရမ်များ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောမျှဝေထားသောစာကြည့်တိုက်များ (စာကြည့်တိုက်များဟုလူသိများသောစာကြည့်တိုက်များ) ပါ ၀ င်သည်။ / bin / y / sbin /, kernel အတွက်စာကြည့်တိုက်များသာမက module များနှင့် driver များဖြစ်သည်။
<° / mean (ဆိုလို / အဓိပ္ပါယ်) ၎င်းတွင်ဖြုတ်တပ်နိုင်သောသိုလှောင်ရေးမီဒီယာများဖြစ်သော CD-ROM စာဖတ်သူများ၊ Pendrives (USB မှတ်ဉာဏ်) စသည့်အချက်များပါ ၀ င်ပြီး၊ အခြားကွန်ပျူတာမှအသုံးပြုသောအခန်းကန့်ကဲ့သို့သော hard disk ၏အခြားအခန်းကန့်များကိုတောင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်။
<° / mnt (တောင်) ဤလမ်းညွှန်သည်ယာယီ drive mounts များအတွက်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် / media နှင့်ဆင်တူသည့် directory တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းကိုအများအားဖြင့်အသုံးပြုသူများကအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် hard drive နှင့် partitions ကို system ပေါ်တွင်ယာယီ mount လုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။ / media လမ်းညွှန်နှင့်မတူသည်မှာသင်စကားဝှက်မလိုအပ်ပါ။
<° / opt (optional): ၎င်းတွင် static applications များအတွက် optional program package များပါဝင်သည်။ ဤအပလီကေးရှင်းများကသူတို့၏တည်နေရာများကိုဤလမ်းညွှန်တွင်မသိမ်းဆည်းပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီသည်တူညီသော application ၏ကွဲပြားခြားနားသောဖွဲ့စည်းပုံကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်၊ သို့မှသာ application ကိုမျှဝေမည်ဖြစ်သော်လည်းအသုံးပြုသူများ၏ configurations များကို၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာ directory ထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ / နေအိမ်.
<° / proc (ဖြစ်စဉ်များ): ၎င်းတွင်အဓိကအားဖြင့်စာသားဖိုင်များ၊ Kernel ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသော virtual file system များနှင့်စာသားဖိုင်များ (ဥပမာ uptime, network) တွင်ရှိသောလုပ်ငန်းစဉ်အခြေအနေများပါ ၀ င်သည်။
<° / root (စီမံခန့်ခွဲသူ): ၎င်းသည်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ / အိမ်ဖြစ်သည် (သူ့အတွက်သာဖြစ်သည်) အဲဒါတစ်ခုတည်းပဲ / နေအိမ် အရာဖျောပွ directory ထဲတွင် defaultby -by မပါဝင်ပါ။
<° / sbin (စနစ် binaries) superuser (root) အတွက်ထူးခြားသည့်အထူး binary system, command များနှင့် program များ၊ ဥပမာ၊ mount, umount, shutdown စသည့် init, route, ifup ။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည်ခွင့်ပြုချက်လုံလောက်စွာရှိပါကသို့မဟုတ် superuser စကားဝှက်ရှိပါကမည်သည့် command application ကိုမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
<° / srv (service): ၎င်းမှပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအချို့ (FTP, HTTP ... ) နှင့်ပတ်သက်သောစနစ်သတင်းအချက်အလက်။
<° / tmp (ယာယီ): ၎င်းသည်ယာယီဖိုင်များသိမ်းဆည်းထားသောလမ်းညွှန်တစ်ခုဖြစ်သည် (ဥပမာ - အင်တာနက် browser) ။ စနစ်စတင်တိုင်းအချိန်တိုင်းဤလမ်းညွှန်သည်သန့်ရှင်းနေသည်။
<° / usr (အသုံးပြုသူများ) အသုံးပြုသူအချက်အလက်၏ဒုတိယအဆင့်။ သုံးစွဲသူများအားလုံးအသုံးပြုနိုင်သည့်အသုံးအဆောင်နှင့်အသုံးချပရိုဂရမ်အများစုပါ ၀ င်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၎င်းတွင်မျှဝေထားသောဖိုင်များပါ ၀ င်သော်လည်းမည်သို့ပင်ဖြစ်စေဖတ်ရန်သာဖြစ်သည်။ ဤလမ်းညွှန်ကိုကွန်ရက်ရှိအခြားကွန်ပျူတာများနှင့်မျှဝေနိုင်သည်။
/ usr / bin: အခြားသူများအကြား desktop application အများစု၏ executables (အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်စီမံအုပ်ချုပ်မှုမဟုတ်သော) အစုံ (ဥပမာ firefox ကို) ။ ၄ င်းတို့သည်ဖတ်ရန်အတွက်သာဖြစ်ပြီး၊ အိမ်တွင် / အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ချိန်ညှိချက်များကိုရနိုင်သည်။ အချို့သော executable များသည်အခြား application များမျှဝေထားသည့်တူညီသော libraries များနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့် system တစ်ခုတည်းတွင်တူညီသော libraries နှစ်ခုမရှိပါ။
/ usr / ပါဝင်သည်ဖြေ C နဲ့ C ++ အတွက် header ဖိုင်တွေ။
/ usr / lib: C နှင့် C ++ အတွက်စာကြည့်တိုက်များ။
/ usr / localဖြေ - နောက်အဆင့်တစ်ခုကအဲဒီလမ်းညွှန်နဲ့ဆင်တူတဲ့အဆင့်ဆင့်တစ်ခုကိုပေးတယ် / usr.
/ usr / sbinမရှိမဖြစ်လိုအပ်သော binary system; ဥပမာအားဖြင့်အမျိုးမျိုးသော network service များအတွက် daemons ။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတွင် user interface ကိုမပံ့ပိုးနိုင်သည့်အပြင်ယေဘုယျအားဖြင့် system startup သို့မဟုတ်အချို့သောအခြေအနေများတွင် run သောပရိုဂရမ်များပါရှိသည်။ ၄ င်းတို့ကို run နေစဉ်အတွင်းအသုံးပြုသူမှတိုက်ရိုက်စီမံခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းတို့ကိုသူတို့မ run မီပြင်ဆင်နိုင်သည်။
/ usr / shareဖွဲ့စည်းမှုဖိုင်များ၊ ပုံများ၊ အိုင်ကွန်များ၊ themes များစသဖြင့်မျှဝေထားသောဖိုင်များ။
/ usr / srcဖြေ - တချို့ application တွေရဲ့အရင်းအမြစ်ကုဒ်တွေ၊ Linux kernel ။ / mnt ကဲ့သို့ဤဖိုဒါသည်အသုံးပြုသူများမှတိုက်ရိုက်စီမံပြီး ၄ င်းတို့အထဲတွင်ပရိုဂရမ်များနှင့်စာကြည့်တိုက်များ၏အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ပြီးခွင့်ပြုချက်များနှင့်အတူပြproblemsနာများမရှိဘဲအလွယ်တကူရယူနိုင်သည်။ ၎င်းသည် source code ကိုကိုယ်ပိုင်အာကာသရှိစေပြီးသုံးစွဲသူများအားလုံးထံမှဝေးကွာစေသည်။
/ usr / X11R6 / X Window System, Version 11, Release 6. ဤလမ်းညွှန်သည် graphical environment နှင့်သက်ဆိုင်သည်။
<° / var (variable များ) မှတ်တမ်းများ၊ spool ဖိုင်များ၊ ဒေတာဘေ့စ်များ၊ ယာယီအီးမေးလ်ဖိုင်များနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ယာယီယာယီဖိုင်များစသည့်အမျိုးမျိုးသောဖိုင်များ။ ယေဘုယျအားဖြင့်သူသည် system registry တစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ပြaနာတစ်ခု၏ရင်းမြစ်ကိုရှာဖွေရန်ကူညီပါ။
/ var / cache ကို: Applications cache, သို့သော် / tmp လမ်းညွှန်ကိုလည်းအတူတူပင်အသုံးပြုသည်။
/ var / crash / လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ်၏ချို့ယွင်းချက်များသို့မဟုတ်အမှားများကိုရည်ညွှန်း။ အချက်အလက်နှင့်အချက်အလက်များကိုအပ်နှံသည်။ ဒါဟာထက်ပိုမိုတိကျတဲ့ဖြစ်ပါတယ် / var ယေဘုယျအားဖြင့်။
/ var / games / စနစ်ဂိမ်းများမှ Variable ဒေတာ။ ဤလမ်းညွှန်သည်မရှိမဖြစ်မဟုတ်ဘဲအသုံးပြုသူဖိုလ်ဒါကိုအသုံးပြုသောကြောင့်ဂိမ်း application များကိုယ်တိုင်မကြာခဏချန်လှပ်ထားတတ်သည် / နေအိမ် ဥပမာ configurations အဖြစ် variable ကို data တွေကိုသိမ်းဆည်းရန်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် gnome ဂိမ်းများသည်ဤလမ်းညွှန်ကိုသုံးသည်။
/ var / libဖြေ - လျှောက်လွှာတွေရဲ့လက်ရှိအနေအထားနဲ့ပက်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေ။
/ var / lockဖြေ - အရင်းအမြစ်တခုကိုသီးသန့် application တခုခုကနေလွတ်အောင်မထုတ်ပြန်ခင်အထိသီးခြားစီတောင်းဆိုတဲ့ဖိုင်တွေသာဖြစ်တယ်။
/ var / log- စနစ်မှတ်တမ်းများအားလုံးကိုဤနေရာတွင်သိမ်းဆည်းထားသောကြောင့်၎င်းသည်အရေးအကြီးဆုံးဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
/ var / mailအသုံးပြုသူများ၏စာတိုက်ပုံးသို့မဟုတ်စာများ။ အကယ်၍ သင်သည် encryption ကိုအသုံးမပြုပါက personal folder ကိုယေဘုယျအားဖြင့် e-mail များကိုကိုင်တွယ်သောပရိုဂရမ်များကထိုအလုပ်အတွက်အသုံးပြုသည်။
/ var / opt: သိမ်းဆည်းထားသော packages များကအသုံးပြုသောအချက်အလက် / ရွေးချယ်ပါ.
/ var / runလတ်တလောသတင်းအချက်အလက်။ ၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့် Boot တက်ချိန် မှစ၍ system ၏လည်ပတ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၀ င်ရောက်လာသောလက်ရှိမှတ်ပုံတင်ထားသောသို့မဟုတ် logged အသုံးပြုသူများ၊ နှင့်နတ်ဆိုးများပြေးနေကြသည်။
/ var / spoolလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်စောင့်ဆိုင်းနေသောလုပ်ငန်းများ (ဥပမာ၊ ပုံနှိပ်ခြင်းစီစဉ်များနှင့်မဖတ်ရသေးသောမေးလ်) ။
/ var / tmpကွဲပြားခြားနားတဲ့ယာယီဖိုင်များ / tmp၎င်းတို့သည်အစည်းအဝေးများ (သို့) system ပြန်လည်စတင်ခြင်းအကြားဖျက်ပစ်ခြင်းခံရသည်မဟုတ်သော်လည်းမည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ dispensable ဖြစ်သည်။
<° / sys (စနစ်) အပြေးစနစ်၏ configuration parameters တွေကိုပါရှိသည်။ kernel, bus, devices, firmware, fs (filesystem) နှင့်အခြားသူများကိုရည်ညွှန်းသောအချက်အလက်များ။
<° / ပျောက်ဆုံး + ရှာတွေ့ Unix စနစ်များတွင်၊ အခန်းကန့် / ဖိုင်စနစ်များတစ်ခုစီတွင်လမ်းညွှန်တစ်ခုရှိသည် / ပျောက်ဆုံး + တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် fsck tool မှတဆင့် filesystem ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်သိမ်းဆည်းထားသောဖိုင်များနှင့်လမ်းညွှန်များ (သို့မဟုတ်ကျန်ရှိနေသေးသောအရာများ) တွင်သိမ်းဆည်းထားသောအရာအားလုံးသည်များသောအားဖြင့် system crashes၊ ကွန်ပျူတာ၏အတင်းအဓမ္မ shutdowns, power outages စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ထိုဖိုင်များနှင့်လမ်းညွှန်များအားလုံးသည်aပြီးနောက်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည် fsck အောက်ပါဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူသိမ်းဆည်းထားပါသည် / ပျောက်ဆုံး + တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဖိုင်တစ်ခုစီ၏အမည်သည် inode နံပါတ်ဖြစ်သည်။
drwxr-xr-x3အမြစ်အမြစ် 4096 2010-03-12 09:38 # 123805
drwxr-xr-x3အမြစ်အမြစ် 4096 2010-03-12 09:38 # 125488
drwxr-xr-x3အမြစ်အမြစ် 4096 2010-03-12 09:38 # 135836
-rw-r - r-2အမြစ်အမြစ် ၂၄၇၃ 2473-2010-03 02:16 # 03
-rw-r - r-2အမြစ်အမြစ် 18505 2010-03-02 16:03 # 137865
-rw-r - r-2အမြစ်အမြစ် 56140 2010-03-02 16:03 # 137866
-rw-r - r-2အမြစ်အမြစ် 25978 2010-03-02 16:03 # 137867
-rw-r - r-2အမြစ်အမြစ် 16247 2010-03-02 16:03 # 137868
-rw-r - r-2အမြစ်အမြစ် 138001 2010-03-02 16:03 # 137869
-rw-r - r-2အမြစ်အမြစ် 63623 2010-03-02 16:03 # 137870
-rw-r - r-2အမြစ်အမြစ် 34032 2010-03-02 16:03 # 137871
-rw-r - r-2အမြစ်အမြစ် ၂၄၇၃ 2536-2010-03 02:16 # 03
ဤဖိုင်များသည်အကျင့်ပျက်ပြားခြင်းသို့မဟုတ်ပြည့်စုံခြင်းမရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ကံကောင်းခြင်းနှင့် fsck အပြီးတွင်ပျောက်ဆုံးသွားသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်မှတ်ထားသောအရာများကိုရှာခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဖိုင်နာမည်နှင့်ဖိုင်ပျောက်ဆုံးသွားသောကြောင့်ဖိုင်များနှင့်လမ်းညွှန်များကိုတစ်ကြောင်းချင်းစီပြန်လည်သုံးသပ်ရမည်။ ၎င်းသည်ဖိုင်များနှင့်လမ်းညွှန်များအားလုံးကိုဖြတ်ပြီး၎င်းတို့အားပြန်လည်နေရာချထားရန်ခက်ခဲသောအရာဖြစ်နိုင်သော်လည်းအချို့ကိစ္စရပ်များတွင်မဖြစ်နိုင်သလောက်ရှိသည်။
fsck (ဖိုင်စနစ်စစ်ဆေးခြင်း (သို့) ဖိုင်စနစ်ကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးခြင်း) - ၎င်းသည်စနစ်အတွင်းဖြစ်နိုင်သောအမှားများကိုပြုပြင်ပေးသောကြောင့်၎င်းစနစ်သည်ဖိုင်စနစ်အတွင်းရှိရှေ့နောက်မညီမှုများကိုဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။ fsck သည် system startup တွင်အလိုအလျောက်အလုပ်လုပ်သည်၊ သို့သော်စနစ်စီမံခန့်ခွဲသူမှလည်းစစ်ဆေးမှုများကိုအတင်းအကျပ်ပြုလုပ်ရန်ကိုယ်တိုင်သုံးနိုင်သည်။
ဒီတော့မင်းတို့သိထားတယ်၊ လေ့လာပါ၊ မနက်ဖြန်မှာ XD စာမေးပွဲရှိမယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အကြံပြုပါသည် » လမ်းညွှန်များကို GNU / Linux တွင်မည်သို့ဖွဲ့စည်းထားသနည်း။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Linux အဖှဲ့အစညျးနဲ့ပတျသကျပွီးအသေးစိတျကိုသိရှိရဖို့အလွန်အသုံးဝင်တယျ။
Joaquín JH ဟုသူကပြောသည်
/ etc / အရိပ်
Joaquin JH အားပြန်ကြားပါ
Perseus ဂုဏ်ယူပါတယ်၊ ကောင်းမွန်သောအလုပ် !! 🙂
အလွန်ကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာ၊ သင်ခန်းစာများရှိဖိုရမ်အတွင်း၌သင်၏ဖြစ်နိုင်ချေများအရ၎င်းကို PDF ထဲတွင်ထားရန်အလွန်ကောင်းသည်။ +1 ။
သင်အမြဲသုံးနိုင်သည် http://www.printerfriendly.com ကက
+10 !!!! အံ့သြဖွယ်, ကိုယ့်အကြိုက်ဆုံးမှပစ္စည်းထည့်သွင်းခဲ့သည်။ Linux ဖွဲ့စည်းပုံ၏ရှင်းလင်းသောရှင်းပြချက်။ ဤအရာများစွာကိုငါမသိခဲ့ပါ !!!!
Perseus ကမှန်ပါတယ် အလွန်ကောင်းတဲ့ဆောင်းပါး😀
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ ဒီဆောင်းပါးကနေကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာသင်ယူခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းရှင်းပြခဲ့လဲဆိုတာအံ့သြစရာပဲ၊ Perseus သူတကယ်ဒီအတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုရှိတယ် အို_O
ဤအချက်အလက်ကိုမျှဝေရန် PDF ကိုသင်မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ 😀
ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါ့ကိုနည်းနည်းလောက်ပေးလိုက်ပါ (နောက်ဆုံးမှာအလုပ်အချို့ရှိပါသေးတယ်။ : D) ပြီးတော့ကျွန်တော် ၀ မ်းသာစွာနဲ့လုပ်ပါ့မယ်
ငါ p ဆိုင်းငံ့လိမ့်မည်
ဤဆောင်းပါးအတွက် Perseus အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဤသတင်းအချက်အလက်သည်ဘလော့ဂ်ကိုများစွာကြွယ်ဝစေသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်သတင်းများသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲပုံကိုဖော်ပြရုံသာမကကျွန်ုပ်တို့၏လည်ပတ်မှုစနစ်နှင့် ပါတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယခုငါသံသယမရှိဘဲငါ "root" မဟုတ်ခဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ "root" မဟုတ်ခဲ့သောကြောင့် "လူဆိုးစာရင်း" ဖိုင်တွေနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်သောအခါငါအမြဲတမ်းသိချင်သောအရာတို့ကိုအကြောင်းအနည်းငယ်ပိုသိ, hehe heh ။
မိတ်ဆွေမှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတိုးတက်အောင်ကြိုးစားပါမယ်။ D. ။
PS: နှောင့်နှေးတာအတွက်ဝမ်းနည်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာအတွက်တခြား distros တွေကိုစမ်းသပ်နေပါတယ်။
file system အစား system ထဲမှ application တစ်ခုအားသူ့ဟာသူ install လုပ်ရန်တွန်းအားပေးသောမည်သည့် command ကိုမဆိုသင်သိပါသလား။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းပြထားတယ်၊ နောက်ဆုံးတော့ငါနားလည်လာတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Slax ရဲ့ live cd ကို Slackware ကိုအခြေခံပြီးဘာကြောင့် media ကိုမဟုတ်ဘဲ mnt ပေါ်မှာတပ်ဆင်တာလဲဆိုတာပါပဲ။ လေးစားပါတယ်
Pdta ။ Sonata စည်းကမ်းများ! 😛
မင်္ဂလာပါ၊ ဒီလမ်းညွှန်ကို pdf (သို့) doc ဖြင့်ကူးယူနိုင်ပါပြီ။ ဒါကြောင့်ငါဘယ်နေရာမှာမဆိုအေးအေးဆေးဆေးဖတ်နိုင်မယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် link ကိုပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သင်သည်တူညီသောဘရောင်ဇာတစ်ခုမှတိုက်ရိုက်ပုံနှိပ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ဤစာမျက်နှာ (ဖိုင်သိမ်းဆည်းမှု) ကိုသိမ်းဆည်းနိုင်သည်၊ ပြီးနောက်၎င်းကိုအိမ်တွင်ပုံနှိပ်နိုင်သည်။
မင်္ဂလာပါနှင့် blog မှကြိုဆိုပါတယ်။
အဆိုပါအလှူငွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် !!! ဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတာသိဖို့အဆင်သင့်ပဲ။
/ dev / လမ်းညွှန်သည်ဖိုင်များနှင့်ပြည့်နှက်နေပြီးကျန်ပစ္စည်းများအတွက် "not drives" (serial port, parallel, physical သို့မဟုတ် virtual disk drives ... blah, blah, blah) ကိုစက်ကိရိယာများနှင့်ညွှန်ပြသည်။
ငါမင်္ဂလာပါအလွန်ကောင်းပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်အားလုံးဒီလှပသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့လာရောက်ပြီး Linux အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်မိတ်ဆွေတစ် ဦး ၏အကြံပြုချက်အရကျွန်ုပ်မှာသံသယများစွာရှိနေသေးသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၀ င်းဒိုးများကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီဟုထင်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းကွန်ပြူတာကိုတွေ့သောအခါကျွန်ုပ်အံ့အားသင့်သွားသည်။ ကျွန်တော်ပိုသိချင်ပါတယ်
Windows တွင် logical partitions (disk C, disk D) ရှိတယ်ဆိုတာယောက်ျားတွေသိတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ windows တစ်ခုခုကိုကြည့်လိုက်ရင် C ကိုငါဖျက်လိုက်တယ်။ D ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ backup အားဖြင့်ငါ Linux ကိုအစားပြန်ကောင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ ငါလုံးဝပျောက်ဆုံးသွားပြီ
ကောင်းပြီ၊ ခင်ဗျားငါ့ကိုကူညီနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ငါ Linux ကိုကြိုက်တယ်၊ မင်းငါ့ကိုကူညီချင်တယ်။
ကောင်းပြီ၊ ပထမဆုံးနှင့်အခြေခံကျသောအရာမှာသင်ယူလိုစိတ်ဖြစ်ရန်လိုသည်၊ အကြှနျုပျ၏အကွံဉာဏျသင်စာဖတ်စတင်ရန်ဖြစ်ပါသည် ဤဆောင်ပါး နှင့်သင်၌တွေ့နိုင်ပါသည်လင့်များ။
ဒါပေမယ့် Windows မှာလိုမျိုးလုပ်ဖို့တော်တော်လွယ်ပါတယ်။ partition ကိုခွဲဖို့ပဲလိုတယ် / နေအိမ်။ ဒါပေမယ့်ငါပြောခဲ့သလိုပဲ၊ မင်းမှာ File System အကြောင်းကိုမသိခဲ့ဘူးဆိုရင် GNU / Linux များငါသည်သင်တို့ကိုဤဆောင်းပါးနှင့်အတူစတင်သင့်တယ်ထင်ပါတယ်😉
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်သိနိုင်သမျှဝေးအောင်ငါသိတာပေါ့။ သူတို့ကဖြန့်ဖြူးတာပဲ။ Kubuntu ကိုငါသဘောကျတယ်။ ငါကတခြားသူတွေကိုတွေ့တယ်။ ဒါပေမယ့်နာမည်ကငါကိုသဘောကျပုံရတယ်။ > ။ <ငါပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းလှမ်းပါလိမ့်မယ်။ Linux နှင့်အတူ။
အလွန်ကောင်းသောရွေးချယ်မှု ^ _ ^
အရမ်းကောင်းတယ်၊ ဟုတ်တယ်ဆရာ။ ဒါဟာသင်ကထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပြီပြသထားတယ်။ အများကြီးနားမလည်တဲ့သူတွေအတွက်အဲဒါကအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ပိုပြီးနေရာယူထားတဲ့သူတွေအတွက်စာဖတ်ရတာကိုနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့သတိပေးချက်တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
မင်္ဂလာနံနက်ခင်း၊ မင်းရဲ့ဆောင်းပါးကိုတကယ်ကြိုက်တယ် ငါသံသယရှိတယ် -
ဖိုင်များကို root directory သို့ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ။ Is / home သည်ပြည့်နေပြီလား / directory ကိုနေရာပိုများများရနိုင်သလားဆိုတာငါသိချင်တယ်။ ၂၀ Gb ထက်ပိုပြီးငါအသုံးချချင်တယ်။ အခန်းကန့်များအရွယ်အစားပြောင်းချင်ပါတယ် ကူညီပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါး၊ ဂုဏ်ပြုလွှာများနှင့်ဆက်လက်ပြုလုပ်နိုင်ရန်၊ ကျွန်ုပ်သည်သင်နှင့်လိုက်နာပြီး BSD (operating system) ကိုသိရန်သင့်အားအမြဲဖိတ်ကြားသည်ကိုမမေ့ပါနှင့်
အလွန်ကောင်းစွာရှင်းပြ, မြတ်သောအလုပ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…!
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Linuxuser နံပါတ်တွင်မည်သည့်အရာများပါဝင်သည်ကိုကျွန်ုပ်မေးမြန်းပြီး၊ ၎င်းကိုမတူညီသောအင်တာနက်စာမျက်နှာများတွင်ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ရပါသည်။ သင့်ရဲ့အဖြေအတွက်ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Alejandra Diel ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းတယ် !! ကျွန်ုပ်၏ Huayra ကိုကျွန်ုပ်၏ကျောင်းကွန်ယက်တွင်တပ်ဆင်ထားပြီး၎င်းတို့သည် Windows ထက် ပို၍ ကောင်းပါသည်။ သတင်းအချက်အလက်ငါ့ထံသို့အလွန်အသုံးဝင်ခဲ့သည်။ မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!!
Alejandra Diel အားပြန်ကြားပါ
Simon Valdes ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကောင်းတဲ့အလုပ်၊ ဒီဟာကသံသယများစွာကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး Linux လောကကိုညွှန်ကြားချက်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်ဟိုက်ဘရစ် disk နှင့်ပါ Ultra တစ်ခုရှိသည်။ အစတွင်ဖော်ပြထားသောအရာအားလုံးကို ssd အစိတ်အပိုင်းတွင်တပ်ဆင်လိုသည်။ ကျွန်ုပ်ရှာနေသည်မှာတိကျစွာရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိသော်လည်းဤမှတ်စုသည် http://www.linux-es.org/node/112 အရင်ဆုံးကျွန်တော်ခန့်မှန်းနိုင်တာက / bin /, / boot / and / dev / directories ဖြစ်ရမယ်။
အလွန်ကောင်းပါတယ်၊ အမှန်တရားကဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကကျွန်တော်တို့အများစုဟာဒီအမျိုးအစားမျိုးကိုမသိသေးတာတောင်မှ linux ကိုဒီလောက်ကြာကြာသုံးခဲ့ကြတာပါ။ အဆိုးဆုံးကတော့ငါးမိနစ်အတွင်းမှာပဲအရာရာကိုငါမေ့သွားလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီစာဖတ်ခြင်းဟာငါ့အတွက်အရမ်းကောင်းပါတယ်။ တူညီတဲ့ဖြန့်ဖြူးမှုအတွက် discs နှစ်ခုသုံးဖို့စဉ်းစားခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ဒီအချက်အလက်မျိုးကိုငါရှာခဲ့တယ်။ ဒီလမ်းညွှန်ဟာအေးဆေးပဲ
MIGUEL SANCHEZ TRONCOSO ဟုသူကပြောသည်
MIGUEL SANCHEZ TRONCOSO သို့အကြောင်းပြန်ပါ
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ငါ man command မှအသိအမှတ်ပြုထားသော QT (C ++) အပလီကေးရှင်း၏အကူအညီအချက်အလက်ကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်သိရန်လိုအပ်သည်။ linux command များနှင့်ဆက်နွှယ်သောဖိုင်များမည်သူမဆိုသိပါသလား ???? ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ။
ကျွန်ုပ်မေးလိုသည်မှာ DOS တွင်ကူးယူခြင်းသို့မဟုတ်ရွှေ့ခြင်းဖြစ်သည်။ c: root နှင့်ကောင်းစွာ destination သည် c မှလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ မည်သူစလုပ်ရမည်ကိုမသိသော ??
အရမ်းကောင်းတယ်၊ blog နဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမှတ်ချက်မပေးခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့အလုပ်ကကောင်းလိုက်တာ၊ နေရာတိုင်းမှာစာဖတ်နေတယ်၊ ​​လေ့လာနေတာတော်တော်များများ ... ဒါပေမယ့်ဒါကအရာရာတိုင်းကိုသူ့နေရာနဲ့သူထားလိုက်ပြီးဒီစမ်းသပ်မှုဟာကြီးမားတဲ့စိတ်ခံစားမှုဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ် ။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အပြောင်းအလဲတွေက Xfce 4.10 မှာလာနေတယ်၊ ​​ကြည့်ရအောင်
BackBox 2.01 ကိုရရှိနိုင်သည်